အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့အကောင်းဆုံးအရာအိုဆာကာအတွက်ဘာလုပ်ဖို့, အိုဆာကာအတွက်ကြည့်ရှုရန် | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့အကောင်းဆုံးအရာအိုဆာကာအတွက်ဘာလုပ်ဖို့, အိုဆာကာအတွက်ကြည့်ရှုရန်
1. အိုဆာကာ Castle
အိုဆာကာ Castle, 大阪城 (အိုဆာကာ Jo) .Famous ရဲတိုက်, သမိုင်းဝင်ဧရိယာလေးတွေနှင့်အတူမိသားစုများအတွက်ကောင်းသော, ဂျပန်ဥယျာဉ်, လူကြိုက်များတဲ့အစက်အပြောက်။
အိုဆာကာ, စျေးဝယ်, လမ်းအစားအစာ, စားသောက်ဆိုင်များ, ဖျော်ဖြေရေး, ဌာနစတိုးဆိုင်များတွင်လူကြိုက်အများဆုံးတိုးရစ်ဧရိယာ။ ညဥ့်အခါကပိုလူကြိုက်များ။
စျေးဝယ်, စားဘို့ရာအရပျ, အိုဆာကာ၏နှလုံး, dotonbori, Nambas ဘို့ချထားပါ။
အိုဆာကာ, Nambas, Shinsaibashi, ရှုခင်းများကြည့်ခြင်း, Shinsekai, စားသောက်ဆိုင်များ, Biliken အတွက်နာမည်ကြီးမျှော်စင်။
5. Universal Studios ကဂျပန်
Universal Studios ဂျပန် (ニバーサル·スタジオ·ジャパンYunibāsaru Sutajio ဂျပန်ユ)
မိသားစုများအတွက်နေရာကောင်း, အိုဆာကာ, ပျော်စရာနေရာ, အိုဆာကာအတွက်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံထဲကဆွဲထား။
6. Geisha လက်ဖက်ရည်ပွဲ Maikoya မှာ
ထူးခြားတဲ့လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားအတွေ့အကြုံကို။ လက်ဖက်ရည်ပွဲအခမ်းအနား, လက်ဖက်ရည်ဥယျာဉ်, sado, wabisabi, ဂျပန်လက်ဖက်ရည်ယဉ်ကျေးမှု, geisha, maiko, အစဉ်အလာ။
အဆိုပါအိုဆာကာ Aquarium Kaiyukan (海遊館 Kaiyukan)
ဒါဟာအကြီးဆုံးအများပိုင်ကမ္ဘာပေါ်မှာငါးပြတိုက်, ငါးမန်းဝေလငါး, ပင်လယ်ခြင်္သေ့, ပင်ဂွင်းငှက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။
8. အိုဆာကာ Takoyaki ပြတိုက်
အိုဆာကာ Takoyaki ပြတိုက် (大阪たこ焼きミュージアム)
ပြတိုက်၌များစွာသောကျော်ကြား takoyaki ဆိုင်များရှိပါသည်။
Sumiyoshi taisha (住吉大社), Sumiyoshi ရန်းဘုန်းကြီးကျောင်း, Sumiyoshi, အိုဆာကာအတွက်ရှင်တိုနတ်ကွန်း။
10. Umeda Sky အဆောက်အအုံ
အဆိုပါ Umeda Sky အဆောက်အအုံ (梅田スカイビル Umeda Sukai Biru), အိုဆာကာစီရင်စု, ဂျပန်၌အကိုး-အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦ။ မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမှတ်တစ်ခုမှာ။
Shitennō-ji (ဂျပန်: 四天王寺, Arahaka-ji, Nanba-ji, ဒါမှမဟုတ် Mitsu-ji), အိုဆာကာ, ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဗိမာနျ။ ပထမဦးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း, ဂျပန်အတွက်အသက်အကြီးဆုံးအရာရှိတဦးကဗိမာနျ။
12. Ramen ခေါက်ဆွဲပြတိုက်
အဆိုပါ Momofuku Ando Instant Ramen ခေါက်ဆွဲပြတိုက် (インスタントラーメン発明記念館 Insutanto-Ramen ခေါက်ဆွဲတ Hatsumei Kinenkan)
Ramen ခေါက်ဆွဲပြတိုက်, ဂျပန်အစားအစာ, ဂျပန်ခေါက်ဆွဲ, မိသားစုများအတွက်ကောင်းသောအစက်အပြောက်။
13. Lucky ဇီးကွက်ကဖေး
မိသားစုများအတွက်နေရာကောင်း, တိရစ္ဆာန်ကဖီး, ထူးခြားသောကဖေး, ပျော်စရာအစက်အပြောက်။
大阪市中央区道頓堀の LUCKYOWL (ラッキーアウル) ။
14. အဆိုပါအိုဆာကာပြတိုက် အိမ်ရာနှင့်နေထိုင်မှုများ
အိမ်ရာနှင့်နေထိုင်မှု၏အိုဆာကာပြတိုက်, အသေးစားသေးသေးလေးလမ်းများနှင့်မြို့များ။ မိုးလုံလေလုံပြတိုက်။
15. အိုဆာကာ Temmangu ဘုန်းကြီးကျောင်း
အိုဆာကာ Temmangu ဘုန်းကြီးကျောင်း (大阪天満宮)
အိုဆာကာ Temmangu ဘုန်းကြီးကျောင်းဂျပန်တွင်အကျော်ကြားဆုံး Tenjin နတ်ကွန်းဖြစ်ပါတယ်။
16. Tenjinbashi လမ်း
Tenjinbashi-suji စျေးဝယ်လမ်း (天神橋筋商店街)
17. Kuromon Ichiba Market က
Kuromon Ichiba Market က (黒門市場)
လမ်းပေါ်, ခွေးလှေးစျေးကွက်, ငါးစျေးကွက်, လတ်ဆတ်တဲ့ငါးစျေးဝယ် “အိုဆာကာ ‘s မီးဖိုချောင်” လူသိများတဲ့ခရီးသွားဧည့်အစက်အပြောက်။
အိုဆာကာရဲတိုက်ထဲကနေအကောင်း Dotonbori, ရန်တူးမြောင်းကိုတွေ့မြင်ရန်။
19 Dotonbori မြစ် Cruise နဲ့
အဆိုပါ Tombori မြစ် Cruise နဲ့ (道頓堀リバークルーズ)
မိနစ် 20,9တံတားများ, ကောင်းသောရှုခင်းများကြည့်။
ပျော်စရာနေရာ, ချိန်းတွေ့ဘို့ကောင်းသောအစက်အပြောက်, မိသားစုများ, ရှုခင်းများကြည့်ခြင်း, ဂျပန်ခရီးသွား။
21. Den Den မြို့
den den မြို့ (でんでんタウン)
anime စတိုးဆိုင်များ, manga ကိုစတိုးဆိုင်များ, anime ထုတ်ကုန်သွားရောက်ပျော်စရာနေရာ, အိုဆာကာ၏အလယ်ဗဟို, နီယွန်လမ်း, Naniwa ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအစက်အပြောက်။
22. Minoh ရေတံခွန်
Minoh ရေတံခွန် (箕面の滝)
သဘာဝတရား, အလှအပ, အစိမ်း, ရေတံခွန်, အိုဆာကာ, စွန့်စားမှု, ရှုခင်းများကြည့်ခြင်း။
23. Senkoji ဘုရားကျောင်း
Senkoji ဘုရားကျောင်း (全興寺)
ဗိမာနျတျော, ဂျပန်အစဉ်အလာ, ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု, ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအစက်အပြောက်။ Senkoji အိုဆာကာ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်တည်ရှိသည်။ ဒေသခံစျေးဝယ်လမ်းမအလယ်ထဲမှာသာမန်ဗိမာနျ။
24. Keitakuen ဥယျာဉ်
Keitakuen ဥယျာဉ် (慶沢園)
ဂျပန် Chisen-kaiyushiki ဥယျာဉ်တော် (ဗဟိုမှာရှိတဲ့ရေကန်နှင့်အတူဂျပန်ဥယျာဉ်တော်) ။ အဆိုပါ Tennoji Park မှာ။
25. Fukuebisu Dotonbori အြန္ကြန္မီယာကီစားသောက်ဆိုင်
အြန္ကြန္မီယာကီဂျပန်ငန် pancake ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပါဝင်ပစ္စည်းများအများအပြားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
26. Hozenji ဘုရားကျောင်း
“Hōzenဘုရားကျောင်း (法善寺Hōzen-ji) ။ နာမည်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းအလယ်ပိုင်းတည်နေရာ။
27. Chihaya Akasaka ကျေးရွာ
Chihayaakasaka (千早赤阪村 Chihayaakasaka-mura) ။ Minamikawachi ခရိုင်, အိုဆာကာစီရင်စု, ဂျပန်တည်ရှိသောတစ်ဦးကရွာ။ Chihaya Castle, Akasaka Castle ။
28. Nambas Yasaka ဘုန်းကြီးကျောင်း
Nambas Yasaka ဘုန်းကြီးကျောင်း (難波八阪神社)
ဒါဟာကျော်ကြား Nanba အတွက်နတ်ကွန်း, ဓာတ်ပုံပညာအစက်အပြောက်, အ Nambas ခရိုင် Tutelary ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။
29. Tempozan ရဟတ်
Big ရဟတ်ကြောင့်, ထိုအိုဆာကာပင်လယ်အော်ဧရိယာ၏ကောင်းသောအမြင်, ရောင်စုံမီးလုံး 17 မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်။
30. Doguyasuji လမ်း
Doguyasuji လမ်း (道具屋筋)
တန်ဆာ, အမှတ်တရပစ္စည်းများ, ဆုကြေးဇူးကိုစျေးဆိုင်, ဓါးစတိုးဆိုင်များ, မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများဟင်းချက်။
31. Hozenji Yokocho လမ်း
Hozenji Yokocho လမ်း (法善寺横丁)
ကောင်းသောဓာတ်ပုံကိုအစက်အပြောက်, အဟောင်းကိုကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဂျပန်လမ်း, ရိုးရာဂျပန်အမြင်။
Abenobashi Terminal နှင့်အဆောက်အဦး (阿部野橋ターミナルビル)
33. ဆာမူရိုင်းအတွေ့အကြုံ Maikoya
ဆာမူရိုင်း (侍), ဆာမူရိုင်းပြတိုက်, အိုဆာကာမှာအကောင်းဆုံးဆာမူရိုင်းအတွေ့အကြုံ, ဆာမူရိုင်းဓား, ဆာမူရိုင်းခမောက်။ ကလေးတွေအဘို့ကောင်းသော, မိသားစုများအတွက်ကောင်းသော။
34. ကီမိုနိုလက်ဖက်ရည်ပွဲအခမ်းအနား Maikoya
လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားအတွေ့အကြုံ, ဘာဝနာ, အစိမ်းလက်ဖက်, Sen အဘယ်သူမျှမ Rikyu, အဆင်ပြေတည်နေရာ, ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကို။
35. သမိုင်း၏ အိုဆာကာပြတိုက်
သမိုင်း၏ “ဒီအိုဆာကာပြတိုက် (大阪歴史博物館, အိုဆာကာ Rekishi Hakubutsukan) ။ အိုဆာကာ Castle,3ထပ်မှ ဆက်လက်. အရာအားလုံးဂျပန်၌တည်ရှိ၏။
36. ဒွန် Quijote Dotonbori
ဒွန် Quijote Dotonbori (ドン·キホーテ道頓堀)
ထူးခြားတဲ့ဂျပန်ထုတ်ကုန်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကို, သေး, လက်ဝတ်ရတနာ, ပစ္စည်း, နည်းနည်းစားသောက်ဆိုင်များ, ထူးခြားတဲ့ကစားစရာ, ထူးခြားတဲ့လက်ဆောင်များ။ စျေးဝယ်အတှကျကောငျး, လူငယျအဘို့ကောင်းသော။
37 Spa ကမ္ဘာ့ဖလား Tennoji
spa ကမ္ဘာ့ဖလား Tennoji (スパワールド)
38 Kidzania Koshien
သားသမီးတို့အဘို့ 4-15 နှစ်ပေါင်းလေးတွေ, မိသားစုများအတွက်ကောင်းသောမိုးလုံလေလုံလှုပ်ရှားမှုရွေးချယ်မှုများအတွက်ဟောင်းအတော်များများကုန်အမှတ်တံဆိပ်, များစွာသောလုပ်ဆောင်မှုများအသက်။
39. ATC ဠာ Square ကို
ATC ဠာရင်ပြင် (ATC コスモスクエア)
အဆိုပါအာရှ & amp; ပစိဖိတ်ကုန်သွယ်ရေးစင်တာတစ်ခုအပန်းဖြေလေးတွေများအတွက်စင်တာ, များစွာသောကဖေး, ကောင်းသောသမုဒ္ဒရာအမြင်, တနင်္ဂနွေအပေါ် anime ပွဲတော်။
40 Jankara Karaoka Nanba
Jankara ကာရာအိုကေ (ジャンボカラオケ)
Jankara ကာရာအိုကေများသောအားဖြင့်ပွင့်လင်း 24 နာရီနေ့ဖြစ်၏ Japan.It အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးကာရာအိုကေသံကြိုးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်သည်များအခမဲ့န့်အသတ်အချိုရည်များနှင့်အခန်းဝန်ဆောင်မှုခံစားပါ။
41 Nakanoshima Koen ပန်းခြံ
“ဒီ Nakanoshima ပန်းခြံ (中之島公園 Nakanoshima kōen) ။ 1891 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်အိုဆာကာ, 11 ဟက်တာ, အိုဆာကာဗဟိုပြည်သူ့ခန်းမထဲမှာပထမဦးဆုံးပြည်သူပိုင်ပန်းခြံတစ်ခုကြွင်းသောအရာယူဥယျာဉ်တော်, အစိမ်းဧရိယာမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
42 Maishima မီးရှို့ဖျက်ဆီးစက်ရုံ
Maishima မီးရှို့ဖျက်ဆီးစက်ရုံ (舞洲スラッジセンター) ။ အိုဆာကာအတွက်စွန့်ပစ်ကုသမှုပြန်လည်စင်တာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာ, ထူးခြားတဲ့ဗိသုကာလက်ရာ။
43 Banpaku Koen ပန်းခြံ
Banpaku Koen ပန်းခြံ (万博記念公園)
အဆိုပါ Expo’70 အထိမ်းအမှတ်ပန်းခြံခန့် 260 ဟက်တာ, အ Expo’70 ၏်ဆောင်မှုများ, ဂျပန်ဥယျာဉ်, ဂျပန်ရိုးရာလက်မှုပညာပြတိုက်, အိုဆာကာ။
44 Zauo ငါးဖမ်းစားသောက်ဆိုင်
Zauo ငါးဖမ်းစားသောက်ဆိုင် (釣船茶屋ざうお)
ငါးကိုအမီလိုက်စား, ငါး, ကောင်းသောမိသားစုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုနဲ့တူလေးတွေဖမ်း။
အသေးစားတိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်ငါးမွေးကန်, ကုန်စည်ပြပွဲပန်းခြံအနီး, မြည်, ငှက်များ, ငါး, ကျား, မိကျောင်း, hippo, lemur ။
46. ​​ Tennoji တိရစ္ဆာန်ရုံ
“Tennōjiတိရစ္ဆာန်ရုံ (天王寺動物園, Tennoji Dobutsuen) ။ 100 ကျော်အသက်အနှစ်Tennōji-ku, အိုဆာကာ, ငှက် conservatory, ခြင်္သေ့, သစ်ကုလားအုပ်တစ်ကောင်, ဆိတ်, ယုန်, မျောက်, ဂေါ်ရီ, ကလေးတွန်းလှည်းအိုကေအတွက်Tennōjiပန်းခြံ
47. Tsurumi Ryokuchi Koen ပန်းခြံ
Tsurumi Ryokuchi Koen ပန်းခြံ (花博記念公園鶴見緑地)
နိုင်ငံတကာဥယျာဉ်နှင့်အစိမ်းရောင် Exposition, ပန်းပွင့်တစ်ကမ္ဘာကပြပွဲ, မော်ရိုကိုအပိုင်း, တရုတ်အပိုင်း, နယ်သာလန်အပိုင်း။
48 Utsubo Koen ပန်းခြံ
Utsubo ပန်းခြံ (靱公園 Utsubo-Kōen) ။ မနီးမဝေး Shinsaibashi ကနေ, ပျော်ပွဲစားဘို့ကောင်းသော, မိသားစုများအတွက်ကောင်းသော။
49. အမျိုးသား Bunraku ပြဇာတ်ရုံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Bunraku ပြဇာတ်ရုံ (国立文楽劇場 Kokuritsu Bunraku Gekijō) ။ ဂျပန်, Bunraku အတွက်ရိုးရာပြဇာတ်ရုံမနီးမဝေး Shinsaibashi ကနေအိုဆာကာနှစ်ခုခန်းမတစ်ခုနှင့်ပြပွဲခန်းထဲမှာပြသထားတယ်။
50. နာဂအိ Koen ပန်းခြံ
“နာဂအိပန်းခြံ (長居公園နာဂအိkōen) ။ ပျော်ပွဲစားဘို့ဂရိတ်, ကြီးသောဂျပန်ဥယျာဉ်တော်, အစိမ်းဧရိယာလေးတွေပန်းခြံအလယ်ပိုင်းတည်နေရာ။
51 Takashimaya Nanba
Takashhimaya Nambas (大阪タカシマヤ), Nanba အတွက်ဇိမ်ခံစျေးဝယ်ရိုးရာဂျပန်ဆိုင်များ, အ bonsai ပြပွဲ, ကီမိုနိုပြပွဲ, ရွှေဗုဒ္ဓပြပွဲ။
52 ဂျပန် Mint,
အဆိုပါဂျပန် Mint, (独立行政法人造幣局 Dokuritsu GyōseiHōjinZōheikyoku) ကို Sakura ရာသီကာလအတွင်းမဟုတ်ဘဲအခြားအရာသီအတွက်လူကြိုက်များသော။
53 Rinku စက်ရုံပြင်ပ Mall က
Rinku ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် (りんくうプレミアム·アウトレット)
Kansai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနီးရှိအနောက်ဂျပန်အကြီးဆုံးထွက်ပေါက်ကုန်တိုက်, အမေရိကန်စတိုင်ထက်ပို 210 စျေးဆိုင်။
54 Daimaru Shinsaibashi
Daimaru Shinsaibashi စျေးဝယ်လမ်းအနီး Shinsaibashi, ဆုကြေးဇူးကိုစိတ်ကူးများအတွက် (大丸) ပေါ်ပြူလာဌာနစတိုးဆိုင်။
55 Maikoya မှာ လက်ရေးလှရေးအတွေ့အကြုံ
ဂျပန်လက်ရေးလှ, တစ်မူထူးခြားတဲ့ဂျပန်အစဉ်အလာ, ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများ, အမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံကို။
56 သိပ္ပံ အိုဆာကာပြတိုက်
အဆိုပါအိုဆာကာသိပ္ပံပြတိုက် (大阪市立科学館အိုဆာကာ Shiritsu Kagakukan) ။ ကလေးတွေအဘို့ကောင်းသောသိပ္ပံပြတိုက်, ကောင်းသောမိုးလုံလေလုံလှုပ်ရှားမှု, sceintific စမ်းသပ်မှုပြပွဲ။
57. Shinsaibashi အတွက် Tokyu လက်တို့ကို
Tokyu လက်စွဲအဖြစ်လူသိများ “Tokyu လက်စွဲ Inc ကို, (東急ハンズTōkyū Hanzu) ။ ဂျပန်ဌာနစတိုးဆိုင်, ထူးခြားတဲ့ဂျပန်ကုန်ပစ္စည်းများ, ဆုကြေးဇူးကိုစိတ်ကူးများ။
58. အနုပညာ အမျိုးသားပြတိုက်
အနုပညာအမျိုးသားပြတိုက် (国立国際美術館 Kokuritsu Kokusai Bijutsukan) ။ Nakanoshima ပန်းခြံ, ဂျပန်အနုပညာ, အနောက်တိုင်းအနုပညာအနီး။
59. Sakai ကရိတ်သိမ်းဟေးလ်
Sakai ကရိတ်သိမ်းဟေးလ် (堺·緑のミュージアムハーベストの丘)
မိသားစုများအတွက်ကောင်းသောစိမ်းလန်းဧရိယာ, ပန်း, ဂျပန်ဥယျာဉ်တော်, နိုင်ငံဘက်ခြမ်း။
60 Kobe မြို့တစ်ဦးက-1 အမဲကင်ဆိုင် Umeda
မူလက Umeda အနီးကအရမ်းစျေးကြီးမဟုတ် Kobe မြို့, မှလူကြိုက်များသော Kobe မြို့အမဲသား reataurant ။
61 အရှေ့တိုင်းကြွေထည်၏ ပြတိုက်
အရှေ့တိုင်းကြွေထည်၏ပြတိုက်, အိုဆာကာ (大阪市立東洋陶磁美術館) ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြွေစုဆောင်းခြင်း။
62 Kamigata Ukiyoe ပြတိုက်
Kamigata Ukiyoe ပြတိုက် (上方浮世絵館)
Kamigata Ukiyoe, Hozenji ဗိမာနျတျောအနီး Kamigata woodblock ထုတ်, အသေးစားပြတိုက်, အနီး Shinsaibashi ။
63 Fujita အနုပညာပြတိုက်
“ဒီ Fujita အနုပညာပြတိုက် (藤田美術館 Fujita Bijutsukan) ။ မိသားစုအနုပညာပြတိုက်, မတစ်ဦးအလယ်ပိုင်းဒေသတွင်ပိုင်ဆိုင်သည်။
64. Umeda အတွက် Yodobashi ကင်မရာ
Ltd. , Yodobashi ကင်မရာ Co. ,, (株式会社ヨドバシカメラ Kabushiki Gaisha Yodobashi Kamera) ။ Umeda အနီးအိုဆာကာအလယ်ပိုင်းတည်နေရာတွင်အကြီးဆုံးအီလက်ထရောနစ်စတိုးဆိုင်, စျေးပေါအီလက်ထရွန်းနစ်။
65. Hoshida Enchi ပန်းခြံ
Hoshida Enchi ပန်းခြံ (府民の森ほしだ園地)
မြို့, ကောင်းသောမိသားစုလှုပ်ရှားမှုအပြင်ဘက်ကျေးလက်, အစိမ်းဧရိယာ, ပန်း။
66. ကြောင်ကဖေး (ကြောင်အမြီး) Shinsaibashi အတွက်
အတော်များများကချစ်စရာကြောင်, 1 အဖျော်ယမကာအဘို့အ¥ 1000 / နာရီ။
67. Taiyuji ဘုရားကျောင်း
“Taiyū-ji (太融寺) အိုဆာကာစီရင်စု, ဂျပန်တစ်ဦးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းသည်။ ဂျပန်တွင်ရှေးအကျဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာ။
68 က Round 1 Sennichi မဲ
round 1 Sennichi မဲ (ラウンドワン千日前) ။ ဘိုးလင်း, မိုးရွာရက်ပေါင်းကောင်းသောကာရာအိုကေ, ဂိမ်းစင်တာ, ကလေးတွေအဘို့ကောင်းသော, မိုးလုံလေလုံလှုပ်ရှားမှု။
69 အိုဆာကာ Castle Nishinomaru ပန်းခြံ
အိုဆာကာ Castle ကြီးမားသောဧရိယာရှိပါတယ်, Nishinomaru ပန်းခြံကိုအကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံကိုအစက်အပြောက်ရှိပါတယ်။
70 Sakai ကစီးတီးပြတိုက်တွင်
Sakai ကစီးတီးပြတိုက်တွင် (堺市博物館 Sakai က-shi Hakubutsukan) ။ Sakai ကကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး 3rd သင်္ချိုင်း, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြတိုက်ရှိပါတယ်။
71 Daisen Koen ပန်းခြံ
Daisen-Oki အမျိုးသားဥယျာဉ် (大山隠岐国立公園 Daisen Oki Kokuritsu Kōen) ။ Sakai ကစီးတီးပြတိုက်, ကြီးသောပျော်ပွဲစားဧရိယာ, အိုဆာကာအတွက်လူကြိုက်များတနင်္ဂနွေအစက်အပြောက်အနီး။
မေဂျီနို့စက်ရုံ Tours မှ။ ကလေးများဒိန်ချဉ်, ကလေးတွေအစားအသောက်ကစားစရာတွေနဲ့ဆော့ကစားပါစေ။
73 Legoland Tempozan
Legoland Tempozan (レゴランド·ディスカバリー·センター大阪)
အဆိုပါ LEGOLAND Discovery Center က 3-10 အသက်သားသမီးတို့အဘို့စံပြဖြစ်ပါတယ်။ Lego နှင့်အတူကစားခြင်း Lego မှစီး, 4D ရုပ်ရှင်ရုံ။
74 Koyaike ပန်းခြံ
Koyaike ပန်းခြံ (昆陽池公園)
75 Koshien အားကစားကွင်း
Hanshin Koshien အားကစားကွင်း (阪神甲子園球場 Hanshin KōshienKyūjō) ။ တစ်ဦးဘေ့စ်ဘောကစားပွဲစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းသော Nishinomiya, ထူးခြားတဲ့ဂျပန်လှုပ်ရှားမှု၌တည်၏။
76 Konpeitou ပြတိုက်
Konpeitō (金平糖, コンペイトー) ။ ကလေးတွေနှင့်အတူမိသားစုများအတွက်ကောင်းသောဂျပန်သကြားသကြားလုံး, ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကွဲပြားခြားနားသောအရသာ။
77. ကလေးများပလာဇာ Umeda
ကလေးများပလာဇာ Umeda (キッズプラザ大阪)
Umeda, ကစားနေတဆင့်ပညာရေးအနီးလူကြိုက်အများဆုံးလေးတွေလှုပ်ရှားမှုအလယ်ပိုင်းတည်နေရာ, ။
78. Kwansei Gakuin University မှကျောင်းပရဝုဏ်
Kwansei Gakuin University မှ (関西学院大学 Kansei Gakuin Daigaku), Kangaku (関学) ။ Nishinomiya အတွက်ကြီးစွာသောကျောင်းဝင်း, အနောကျပိုငျးစတိုင်။
79. Nangou ငါးလုပ်ငန်း Center က
Nangou ငါးလုပ်ငန်းစင်တာ (南郷水産センター)
ကလေးတွေအဘို့အအတော်များများကငါးဖမ်းရေကန်, ပျော်စရာငါးဖမ်းလှုပ်ရှားမှု, အိုဆာကာအတွက်အကောင်းဆုံးငါးဖမ်းစက်အပြောက်။
80 Mitsui စက်ရုံပြင်ပပန်းခြံ
Mitsui စက်ရုံပြင်ပပန်းခြံ (三井アウトレットパーク大阪)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်-name ကိုစတိုးဆိုင်များ, လျှော့စျေးနှုန်းများ, အဆင်ပြေတည်နေရာ။
81 Okumizuma အားကစားအားကစား
Okumizuma အားကစားအားကစား (奥水間アスレチックスポーツ)
ကလေးတွေအဘို့အငါးဖမ်းလှုပ်ရှားမှု, ငါးရှဥ့်ဖမ်း, BBQ, ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ။
82 Hankyu Umeda
“Hankyu Department Store (阪急百貨店Hankyū Hyakkaten), အနီး Umeda, ကောင်းသောကော်ဖီဆိုင်, ကောင်းသောစားသောက်ဆိုင်။
83. Misaki ပန်းခြံ
Misaki ပန်းခြံ (みさき公園) “Misaki Koen ။ ” မြို့သူမြို့သား, အစိမ်းဧရိယာပြင်ပမှာ။
84. Rinku Park ကသဲသောင်ပြင်
Rinku Park ကသဲသောင်ပြင် (りんくうビーチ) ။ နွေရာသီ, ကြီးသောကမ်းခြေသဲကာလအတွင်းအလွန်လူကြိုက်များသည်, Kansai လေဆိပ်နှင့်နီးစပ် suntanning ။
85 Umeda ထပ်ခိုး
Umeda ထပ်ခိုး (梅田ロフト) “Umeda Lofuto ။ ” လက်ဆောင်ပေးမယ်စိတ်ကူးများ, အဆင်ပြေတည်နေရာ။
86 Hanshin ပြိုင်ကားကွင်း
Hanshin ပြိုင်ကားကွင်း (阪神競馬場 Hanshin-keibajō) ။ မြင်းပြိုင်ပွဲ, ထူးခြားတဲ့ဂျပန်လှုပ်ရှားမှု, 139.000 လူများ၏စွမ်းရည်။
87 ကီမိုနိုစမ်းသပ် Maikoya
အဆိုပါကီမိုနို (着物, きもの) ရိုးရာဂျပန်အထည်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိုဆာကာအတွက်အကောင်းဆုံးကီမိုနိုစုဆောင်းခြင်း, အကောင်းဆုံးအိုဆာကာအတွက် yukata စုဆောင်းခြင်း, ကီမိုနိုဓာတ်ပုံ, ကီမိုနိုအတွေ့အကြုံ, ကီမိုနိုရုံးတင်စစ်ဆေး။
88 အတန်းအစား Maikoya ဟင်းချက်
အိုဆာကာ, အိုဆာကာ, အိုဆာကာ, အိုဆာကာ, အိုဆာကာတွင်ပုဂ္ဂလိကချက်ပြုတ်အတန်းထဲတွင် takoyaki အတွက်အြန္ကြန္မီယာကီထဲမှာဆူရှီချမှတ်ခြင်းအတွက်ဟင်းချက်။
89 Kura ဆူရှီ Umeda
Kura ဆူရှီ Umeda (くら寿司)
အိုဆာကာတက္ကသိုလ် (大阪大学အိုဆာကာ daigaku), သို့မဟုတ် Handai (阪大 Handai) ။ ဂျပန်အတွက် 3rd အကျော်ကြားဆုံးတက္ကသိုလ်။
91 Nanba ပန်းခြံ
Nambas ပန်းခြံ (なんばパークス Nanba Pākusu) ။ Nanba အနီးအဆင်ပြေတည်နေရာ, Swissotel, ထူးခြားတဲ့ဗိသုကာအနီး။
92. Hirakata Koen အပန်းဖြေပန်းခြံ
Hirakata ပန်းခြံ (ひらかたパーク Hirakata ပကူးစကောကရင်) ။ “Hirapah” anpanman, ဂျပန်စတိုင်အပန်းဖြေပန်းခြံ။ တည်နေရာအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး။
Nambas, ထူးခြားတဲ့ဂျပန်အတွေ့အကြုံကိုအတွက် Pachinko ။
, စျေးဆိုင်, ကဖေး, ဖက်ရှင်ဆိုင်များ, ယေဘုယျကုန်သွယ်စတိုးဆိုင်များနှင့်အတွင်းပိုင်းကုန်ပစ္စည်းများစျေးဆိုင်ဖက်ရှင်လူငယ်များအဘို့ကောင်းသော, အာရှခရီးသွားများအကြားရေပန်းစား။
95 ထောက်ကူမဲ့ကျောက်ဆောင်တက်ခြင်းဆွဲငင်အားသုတေသန တက်ခြင်း
Umeda အတွက်ထောက်ကူမဲ့ကျောက်ဆောင်တက်ခြင်းဆွဲငင်အားသုတေသန (グラビティリサーチ梅田) စတိုင်ထောက်ကူမဲ့ကျောက်ဆောင်တက်ခြင်းအားကစားရုံတက်ပြီး!
GLION ပြတိုက် (ジーライオンミュージアム)
ဂန္ထဝင်ကားတစ်စီးပြတိုက်, ဂျပန်ကနေကားတွေ, ဥရောပကနေကားတွေ။
(池田城), IkedaJo ။ Ikeda အတွက်တစ်ဦးကလှပသောအသေးရဲတိုက်။ မနီးမဝေးမြို့လယ်ကနေ။ ဂျပန်ဥယျာဉ်တော်။
(岸和田城), KishiwadaJo ။ အိုဆာကာအတွက်အသေးစားရဲတိုက်။ မနီးမဝေးမြို့လယ်ကနေလှပသောကျောက်ကိုဥယျာဉ်တော်။
99.100: ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှု maikoya မှာအတှေ့အကွုံမြားနှငျ့ဆာမူရိုင်း ပြတိုက်
-Osaka ဂျပန်အတွက် 2nd အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။
-Osaka Castle ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလုံးဝဖြိုဖျက်ခဲ့သည်။ အိုဆာကာအကြီးအကျယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဗုံးကြဲခဲ့သည်။
-Osaka ရဲ့အမည်ပြောင် “ဂျပန်ရဲ့မီးဖိုချောင်၏။ ”
ဂျပန်တွင် -Famous လူရွှင်တော်အိုဆာကာကနေဖြစ်ကြသည်။
အိုဆာကာအတွက် -People တိုကျိုကလူတွေ (ပုံမှန်ပုံရိပ်ကို) ထက် friendlier ဖြစ်ကြသည်။
ဂျပန်တွင်ရတာဟာအမြင့်ဆုံးမျှော်စင်အိုဆာကာ (Abeno Harukas) ၌တည်ရှိ၏။
ရတာဟာအသက်အကြီးဆုံးအရာရှိတဦးကဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းအိုဆာကာ (Shitennoji) ၌တည်ရှိ၏။
-Osaka ၏မွေးရပ်မြေက “လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနား။ ”
-Osaka takoyaki နှင့်အြန္ကြန္မီယာကီ၏မွေးရပ်မြေဖြစ်ပါတယ်။
-Osaka ၏မွေးရပ်မြေက “Bunraku ။ ” Bunraku ဂျပန်စတိုင်ရုပ်သေးပြဇာတ်ရုံပါပဲ။
– “ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ 1970” အိုဆာကာကျင်းပခဲ့သည်။
-Osaka သာ 25 မိနစ်ကွာ Kobe မြို့ကနေဖြစ်ပါတယ်။ အိုဆာကာသာမိနစ် 30 ကွာကျိုတိုကနေဖြစ်ပါတယ်။
ယူအက်စ်အေပြင်ပတွင် “USJ” -First ။
1- “Nande အဘိဓါန် yane” (အဘယ်ကြောင့်)
2- (မဖြစ်နိုင်ပါဘူး) “Akan အဘိဓါန်”
က c) “Hommani” (သင်အလေးအနက်ရှိပါတယ်)
အဘယ်အရာကိုဒီကျော်ကြားမှတ်တိုင်အိုဆာကာအဆိုပါမြောက်မြားစွာပန်းခြံကနေအပွင့်လည်းနေရာတိုင်းလျှင်ကြောင့်ပေါ်လာသောအဖြစ်နွေဦးအတွက်သွားရောက်ခြင်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာပါပဲ။ Walking ခရီးစဉ်ရဲတိုက်နံရံများကိုအတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများနှင့်ကွန်းကြည့်ရှုရန်, ဒီမှာလူကြိုက်များကြသည်။ သင်အချိန်ရှိပါကသင်တစ်ဦးအထင်ကြီးဆာမူရိုင်းလက်နက်တိုက်ရရှိထားသူတစ်ဦးပြတိုက်ရှိပါတယ်ရသောရဲတိုက်, အထဲမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
2. က Universal Studios
ကဂျပန်ငါကUniversal Studios ကတစ်ဦးအလည်အပတ်ရန်မပြောပါဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ စီး, ဂိမ်းများ, အခြေတည်အစုံနှင့်စျေးဆိုင်, အပြန်အလှန်ပြပွဲနှင့် 4D အတွေ့အကြုံများ; အခြေခံအားဖြင့်ကြီးစွာသောမိသားစုသည်နေ့ရက်သည်အရာခပ်သိမ်းကိုထုတ်။ အဘယ်အရာကိုအိုဆာကာမှမဆိုခရီးစဉ်က Universal Studios ကဂျပန်မရှိမဖြစ်စေသည်ထိုကဲ့သို့သော Evangelion, Godzilla, Titan အပေါ်တိုက်ခိုက်, စုံထောက် Conan နှင့် Monster Hunter အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျော်ကြားဖျော်ဖြေရေးအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်အခြေခံပြီးက Universal ကိုခေါ်သစ်ကိုဆွဲဆောင်မှုဂျပန် 2017 Cool ဖြစ်ပါသည်, အသစ်အတှေ့အကွုံမြားသငျသညျထားမည်မှရင်ဆိုင်ရ အနုပညာနည်းပညာ၏ပြည်နယ်ကို အသုံးပြု. သည်ဤအထင်ကရဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ သငျသညျတော့ဘူးမကိုင်တွယ်နိုင်လျှင်အဖြစ်အသစ်တစ်ခုဟယ်ရီပေါ်တာအပိုင်းကိုလည်းနည်းတူကောင်းစွာမှော်ပရိတ်သတ်များအဘို့အဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ငါအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးနေ့ကအကြံပြုလိမ့်မယ်။
3.’၏လမ်းမများပေါ်တွင်ရေပေါ်အားဖြင့်Aqua ဘတ်စ်ကား Aqua
‘ရေ Metropolis’ ကှနျ့ကြည့်ရှုအိုဆာကာအပေါ်တစ်ဦးစီးနင်ယူပါနှင့်အဓိကအပန်းဖြေကြည့်ရှုမြစ်ထဲကနေအစက်အပြောက်။ အဆိုပါ Aqua ကှနျ့သင်န်းကျင်ရှုခင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးလည်းအိုဆာကာမြစ်တံတားအောက်မှာရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောပြတင်းပေါက်နှင့်အတူလှေတညျဆောကျတဲ့အထူးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအပျော်စီးနေ့တိုင်း 1.5 နာရီနှင့်ပြေးဘို့ကြာရှည်ခံသည်။ သငျသညျနေ့လယ်စာ, နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ညစာများအတွက်ခရီးစဉ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်အရည်အသွေးကိုဝန်ဆောင်မှုကိုခံစားနိုင်အောင်ကိုလည်းသင်ကသူတို့စားသောက်ဆိုင်ရုဇ်အပေါ်အချိန်စာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
Tsutenkaku ကှနျ့အိုဆာကာမြို့၏သင်္ကေတအဖြစ်လူသိများသည်,ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလည်အပတ်မဆိုအိုဆာကာခရီးစဉ်အပေါ်ဖြစ်သင့်သည်။ ထိပ်မှာ, သင်က၎င်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ဒီဇိုင်း Eiffel မျှော်စင်နှင့် Arc de အောင်မြင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးမည်သို့ကဲ့သို့မြို့နှင့်ရဲတိုက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်, သင်စာအုပ်ဆိုင်နှင့်တက်ရောက်ရန်လိုအံ့သောငှါဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအကွာအဝေးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာရဲတိုက်၏အခြေစိုက်စခန်းမှာအကောင်းတစ်ဦးကံကောင်းပါစေဘုရား Billiken, Glico အစားအစာဆိုင်နှင့်၎င်း၏ပြဇာတ်ရုံ၏ရုပ်တုအဆိုပါလေ့လာရေးကုန်းပတ်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
5 ။ အိုဆာကာ Aquarium Kaiyukan
ဒီဆွဲဆောင်မှုဒီငါးမွေးကန်သမုဒ္ဒရာထဲကနေအလွန်ကြီးမားသောငါး၏ခင်းကျင်း, နို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့်အခြားရေနေဘဝအိမ်ရှင်အဖြစ်အဖြစ်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာအကျော်ကြားဆုံးနေထိုင်သူတစ်ဦးဝေလငါးငါးမန်း, ကမ္ဘာပေါ်မှာငါးမန်းများ၏အကြီးမားဆုံးအမျိုးအစားပါ! သာအနည်းငယ်သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောငါးပြတိုက်အတွက်အသက်ရှင်သည်အတိုင်းတဦးတည်းကိုမြင်လျှင်, ရှားပါးမျက်မှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤကြီးမားသောကောင်လေးငါးမန်းများနှင့် stingrays နှင့်အတူငြိမ်းချမ်းစွာရေကူးတွေ့မြင်အဖြစ်အဆောက်အဦး၏အနိမ့် level မှာတစ်ဦးလက်ပေါ်ရော့ခ်ရေကူးကန်ထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူငယ်ချင်းများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်!
နှင့်အိုဆာကာမြို့အလွန်ဟောင်းသမိုင်းရှိပါတယ်, သင်ကအိမ်ရာနှင့်နေထိုင်မှု၏အိုဆာကာပြတိုက်မှာဘဝမှလာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကအဲဒိုကာလများတွင်ဖြစ်သကဲ့သို့ထိုမြို့တစ်ဦးကမော်ဒယ်, display ကိုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, သင်တို့ကဲ့သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုငျကွောငျး recreated အဆောက်အဦးများနှင့်လမ်းများ။ အပြန်အလှန် display တွေအိုဆာကာရဲ့သမိုင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောကာလကိုတစျဆငျ့သငျသညျသယ်ဆောင်ရန်နှင့်ဤမြို့ကိုကြောင့်ယနေ့ကဲ့သို့လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်အဖြစ်သင်ဒီမှာနေတဲ့အချိန်စက်မလိုအပ်ပါဘူး။
7. Momofuku Ando Instant Ramen
– ဂျပန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်ဦးကအကြိုက်ဆုံးဟင်း။ သင်တို့မူကား, ခေါက်ဆွဲခြောက်ဂျပန်ထံမှလာသည်ဟုသိကျွမ်းခဲ့တာလဲ သငျသညျသုံးဆယ်ခေါက်ဆွဲ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရသာသို့မဟုတ်ဂျပန်တွင်ရရှိနိုင်ဂျပန်ခေါက်ဆွဲခြောက်ကျော်ရှိပါတယ်သိကြသလား? သင်ဤပြတိုက်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်လေ့လာသင်ယူနှင့်ထို့ထက် ပို. အရေးကြီးသည်မှာမြည်းစမ်း, ချက်ချင်းခေါက်ဆွဲများ၏သမိုင်းနိုငျပါသညျ!
8 အိုဆာကာ Shochikuza ပြဇာတ်ရုံမှာ Kabuki Show
Kabukiကိုကြည့်ရှုပါရိုးရာမျက်နှာဖုံးများနှင့်ဝတ်စုံပါဝင်သောပြဇာတ်ရုံတစ်ရိုးရာဂျပန်စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။သငျသညျထိုကဲ့သို့သော aragoto စတိုင်သို့မဟုတ် actioned ထုပ်ပိုးကစားသို့မဟုတ် wagoto စတိုင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရင်ခုန်စရာရေးရာကစားသကဲ့သို့, Shochikuza ပြဇာတ်ရုံမှာပြသကြည့်ဖို့ဘွတ်ကင်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအချိန်-ဂုဏ်ပြုဂျပန်စတိုင်ကခုန်နှင့်ဂီတရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေသင်လက်လွတ်မနိုငျပါသညျ!9 ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Chihaya-akasaka-mura ကျေးရွာသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်နေ့ခရီးစဉ်ကို ယူ.
သင်တစ်ဦးအားလပ်ချိန်မှာတစ်ရက်ရှိသည်နှင့်အိုဆာကာပတ်လည်ရှိတောင်များကိုတွေ့မြင်လိုပါကလာရောက်လည်ပတ် Chihaya-akasaka-mura ကျေးရွာတစ်ခုတောက်ပစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Konogozan တောင်တန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်, ဒီရွာကဂပြနျစပါးလယ်ကွင်းများနှင့်ကျေးလက်၏ဂုဏ်အသရေကိုမြင်ရပါစေပါလိမ့်မယ်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်တောင်ပေါ်သို့တက်တောင်တက်အပါအဝင်, ဒီမှာလုပျနိုငျတဲ့တွေအများကြီးဖြစ်ပါသည်ဒေသခံရောက်ရေချိုငါးဘို့ငါးဖမ်း, ရွာစျေးကွက်ရှာဖွေစူးစမ်း, ထွန်းလင်းနှင့် Shimo-Akasaka Castle အပျက်အယွင်း။
千早赤阪ထိုကဲ့သို့သောသစ်ကိုဆွဲဆောင်မှုအတူ村တစ်ဦး planetarium သကဲ့သို့, အိုဆာကာသိပ္ပံပြတိုက်အာကာသသို့မဟုတ်စွမ်းအင်ကိုစိတ်ဝင်စားသောသူမည်သူမဆိုအဘို့ကြီးစွာသောအလည်အပတ်ခရီးဖြစ်လိမ့်မည်! သင်သည်သင်၏အာရုံနှင့်အတူသိပ္ပံလေ့လာစူးစမ်းအဖြစ်လက်ကမ်းပြပွဲသငျ့စိတျထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်။ ဒါကပြတိုက်က၎င်း၏အသစ်အ planetarium အပိုင်းအတွက်၎င်း၏မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်စနစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အထူးပြုလုပ်အမိုးခုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ 28000 ကျော်ကြယ် intergalactic အလောင်းတွေပြသနိုင်မဝါကြွား။ အကြည့်သရုပ်ဆောင်ဖို့ဘာတစ်လမ်း!
11. Maikoya အိုဆာကာ
Maikoyaအိုဆာကာတဦးတည်းတည်နေရာအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောစစ်မှန်ဂျပန်အတွေ့အကြုံများကိုပေါင်းစပ်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကခရီးသွားဧည့်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးရှုပ်ထွေးပါ! သငျသညျထိုကဲ့သို့သောစက္ကူခေါက်ခြင်း, ပန်းပွင့်စီစဉ်ဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားအဖြစ်ပိုပြီးရိုးရာဂျပန်လှုပ်ရှားမှုများသင်ယူဖို့ယူနိုင်သောအတန်းနေသောအိုဆာကာ Studios က, Maiko Caféနှင့်စိတ်အိုဆာကာယဉ်ကျေးမှုအတွေ့အကြုံများလုပ်ဖို့အရာအပါအဝင်ကဏ္ဍများနှင့်အတူ။ ဒီမှာလှုပ်ရှားမှုများအများစုလက်ပေါ်မှာအဖြစ်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တပြင်လုံးကိုမိသားစုများအတွက်တစ်ခုခုကဒီမှာရှိတယ်ပါ! သည်အခြားခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုမတူဘဲ, အိုဆာကာလုပ်ဖို့အရာအခန်းပေါင်း setting တစ်ကြိုဆိုပွဲရိုးရာအိမ်မှာန်ထမ်းစကားပြောဖော်ရွေအင်္ဂလိပ်နှင့်အတူအိမ်မှာသင်မှန်ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။
Umedaစျေးဝယ်ဒါမှမဟုတ်Kita ခရိုင်, မြို့အလယ်ဗဟိုတက်စေအများအပြားစျေးဝယ်အဆောက်အဦးရှိပါတယ်။ အကျော်ကြားဆုံးအချို့သည် Hankyu ဦးစီးဌာန Store နဲ့ Daimaru ဦးစီးဌာန Store ကိုဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျစားသောက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်များနှင့်သေးငယ်ဆိုင်များနှင့်အတူ High-end အမှတ်တံဆိပ်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤအဌာနကစတိုးဆိုင်ထဲကအတော်များများဒီတော့နာရီကြာနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစျေးဝယ်, မြေအောက်အဆင့်ဆင့်အပါအဝင်မျိုးစုံပုံပြင်များ, ရှိသည်။ ကစာသား inUmeda ဦးစီးဌာနစင်တာများဖွစျနိုငျသကဲ့သို့သင်တို့ drop မရောက်မှီတိုင်အောင်, ဆိုင်, ပဲစကားပုံမဟုတ်ပါ!
ဝတ္တုစာအုပ်ဆိုင်ဂျပန်စျေးဆိုင်ပြီးသားကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လက္ခဏာနှင့်ပစ္စည်းများအဖြစ်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်အသစ်အဆန်းတစ်ခုသဘောမျိုးကိုင်ထားဘို့ဤနေရာတွင်စာရင်းဒေသများမှာတွေ့ရှိတချို့ကစျေးဆိုင်တစ်ဆောင်ပုဒ်သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီး, ဤအနည်းငယ်သာကျောက်မျက်ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ Kiddy မြေအိုဆာကာဂျပန်အကြီးဆုံးကစားစရာစတိုးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျဓာတျပုံနှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုယူနိုင်သောနေရာတဝိုက်လမ်းလျှောက် mascots, အဖြစ်အပျက်နေရာများရှိပါသည်ကြောင့်ကျိန်းသေအရှိဆုံးပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ Pokemon လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များအတွက်အိုဆာကာရထားဘူတာရုံမှာ Pokemon Center ကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးပန်ကာမဟုတ်တောင်မှလျှင်, display တွေကြည့်ရှုဖို့လာမယ့်နှလုံးမှာငယ်ရွယ်သူတို့အဘို့တစ်အားရစရာရှိနိုင်ပါသည်။ စူပါကလေးတွေကမြေ Honten Joshin ပရိတ်သတ်တွေနေသောသူတို့အဘို့ကြီးတစ်ခု anime နှင့် manga ကိုစတိုးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Covo ထိုကဲ့သို့သောစာရေးကိရိယာများ, စားပွဲဝိုင်း, အဆင်တန်ဆာများနှင့်အခြားချစ်စရာ knick-knacks အဖြစ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြင်သစ်ပေါ့ပ်ယေဘုယျကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချပါတယ်။
ရန်းတပ်ဦးအိုဆာကာစျေးဝယ်သွားဖို့နောက်ထပ်နေရာအရပ်နဲ့ရှာဖွေစူးစမ်းဟာဂရန်းတပ်ဦးအိုဆာကာအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ, ဒါပေမယ့်လည်းလူနေအိမ်တိုက်ခန်းတွေနဲ့ဟိုတယ်ရရှိထားသူမသာ။ အဆောက်အဦးအတွင်း၌တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့ရပ်နားသည့် Panasonic က Center ကဖြစ်သကဲ့သို့ဤတည်နေရာကိုဤစာရင်းတွင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အီလက်ထရောနစ်အမှတ်တံဆိပ်သင်မြင်ခြင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်အဘို့အနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်အတူထွက်တကွသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကားအရောင်းပြခန်း, ရှိပါတယ်။ သင်၌စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံကိုဂျပန်တွင်ဖန်ဆင်းရှိတဲ့ + STYLE ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦး၏တောင်ဘက်တောင်ပံမှာတည်ရှိပါတယ်, သင်ရောင်စုံပစ္စည်းများ, strips တွေနှင့်ခါးပတ်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မူရင်းအိတ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာကိုအနည်းငယ်စျေးကြီးအရွယ်အစားပေါ်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာအခြားသင်သည်ထုံးစံသင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လက်ကိုင်အိတ်ဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ် ?!
ဂျပန်ရဲ့အများဆုံးစတိုင်ဘူတာတစ်ဦးအဖြစ် Namedခရီးစဉ်ဟာအိုဆာကာဘူတာစီးတီး,ဤတည်နေရာကိုဖွင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထက်ပူဇော်ဖို့ပိုရှိပါတယ်။ ဖန်ခွက်ကိုအမိုးအောက်မှာလူအဝင်နှင့်၎င်းတို့၏ရထားကနေစွန့်ခွာစောင့်ကြည့်ကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဒီနေရာတွင် Umeda ၏အပေါ်ခရီးသွားရာတွင်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသဘာဝအချိန်နည်းနည်းဖြုန်းဖို့လိုမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအစအဆောက်အဦး ” rooves အပေါ်မြောက်မြားစွာဥယျာဉ်နှင့်ခြံရှိပါတယ်။ တောင်ဂိတ်အဆောက်အဦးအတွက်၎င်း၏ကျော်ကြားရေနာရီထုတ် Check – ကကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်! သင်ဒီမှာစျေးဝယ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားမိလျှင်နောက်ဆုံးတွင်, ဒီအာကာသလည်းမြောက်မြားစွာစတိုးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ဒီကုန်တိုက်ဟာ Umeda ခရိုင်၌တည်ရှိ၏နှင့်တရာနှစ်ခုကျော်စျေးဆိုင်ရရှိထားသူ 1987 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်Whity Umedaဆိုင်နည်းလမ်းက’ပြန်လည်မွေးဖွားအဖြူမြို့’ ‘ဘာသာပြန်ထားသော – ဒါပေမယ့်အားလုံးမြေအောက်ပါ! ဒီနေရာတွင်အဝတ်အစားစတိုးဆိုင်များ, အလှကုန်, ဖိနပ်, ရတနာနှင့်ပိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အလယ်ဗဟိုတွင်တစ်ဦးကစမ်းရေတွင်း၌သင်တစ်ဦးအနီးအနားမှာစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရပ်တန့်ဖို့လိုခငျြအမှု၌အဆင်းလှသောဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချွတ်ပေးသည်။
Hankyu Entertainment က Park 17.Ride
တစ်ခုအပန်းဖြေပန်းခြံတစ်ဦးစျေးဝယ်ကုန်တိုက်အတွင်းမှခဲ့လျှင်ကူးတို့ဘီးဆိုပါစို့။ဒါကသင်တို့အဘို့ Hankyu Entertainment ကပန်းခြံပါပဲ။ သငျသညျထိုအဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်တွင်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ပထမဦးဆုံးအရာကိုသင်အိုဆာကာစီးတီး၏ 360 ဒီဂရီအမြင်များကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်ရှိရာ Hep ငါးခုရဟတ်ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းပိုင်းကိုသင်စျေးဆိုင်များနှင့်အပန်းဖြေအဆောက်အဦတစ်ခုအကွာအဝေးကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ အတော်များများကအငယ်လူကြီးများ, စားသောက်ဆိုင်နှင့် Sega ဂိမ်း ROOM တွင်များအတွက်ခေတ်မှီစျေးဆိုင်ပျော်မွေ့။ သင်တို့သည်လည်းမျက်နှာကျက်ကနေဆွဲထားကြီးမားတဲ့အနီရောင်ဝေလငါးများပါဝင်သည်သောအဆောက်အဦးအတွင်းမှများစွာသောထညျ့ဇာတ်ကောင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအဖွင့်အနေနဲ့ဖျော်ဖြေရေးအစက်အပြောက်ပါသလဲ တကယ့်တစ်ဦးစျေးဝယ်ကုန်တိုက်လား? အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်ရှာတွေ့ပြန်ပြောဘာသင်ဒီမှာလာရောက်လည်ပတ်ပျော်စရာရှိသည်မယ်!
ဤသည်တို့သည်ဗိမာန်တော်ကအိုဆာကာ၏လူတန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့လှပသောသည်ဗိမာနျတျောမှာရုပ်ပုံများကိုယူပါ။Shitennoji ဘုရားကျောင်းကိုဂျပန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းကြီးနှင့်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးက၎င်း၏ positioning ကိုထံမှအများအပြားဘာသာရေးရှုထောင့်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ, အလွှာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာများအလေးကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ Kings enshrining ၏ရည်ရွယ်ချက်။ ဤ site ဟာအလုပ်များအိုဆာကာမြို့နှင့်ဂျပန်ရှေးဟောင်းဗိသုကာဦးပထမဦးဆုံးလက်ကိုတွေ့မြင်ဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်အပန်းဖြေဖို့နေရာအဖြစ် (ကညဥ့်အချိန်တွင်တက် lit ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ) က၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံကိုအလားအလာအဘို့ဤစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ရှိ Umeda Sky အဆောက်အအုံတစ်ခုခရီးစဉ်စေရန်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဆောက်အအုံတွင်ကြည့်ပါ။ပထမဦးဆုံးအကြောင်းရင်းဆှဲဥယျာဉ်, ‘ဗာဗုလုန်ဆှဲဥယျာဉ်’ ‘တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ယူကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အလင်းအိမ်နှင့်အခြားတောက်ပအလှဆင်မျှော်စင်ကိုယ်တိုင်ကအသက်ရှင်လျက်ပေါ်လာအောင်, ပတ်လည်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုအရပ်မှ, သငျသညျ 360 ဒီဂရီဘုန်းအတွက်မြို့တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီတစျခုလုံးကိုအဆောက်အဦဖန်ထဲကလုပ်လျှင်ကြောင့်ပေါ်လာသောအဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သငျသညျ, ခေတ်သစ်ဗိသုကာစတိုင်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်အရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးများပါဝင်သည်သော Umeda Sky အဆောက်အအုံအတွင်းရှိစျေးဆိုင်များ, စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သင်ဒီမှာချစ်ရသူတစ်ဦးဆောင်ခဲ့နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်ဤအဆောက်အဦး၏ထိပ်မှာစွန့်ခွာဖို့နှလုံး shaped သော့ခလောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်၏မေတ္တာသည်အစဉ်အမြဲဒီအချစ်ခရီးလမ်းဆုံးမှာပြဌာန်းဒီသော့ခတ်အဖြစ်လေ့လာမှု, ကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။
20. စစ်ဆေးမှုထဲက Hankyu Umeda
ပြခန်းဒီအတော်လေးမကြာခဏပြခန်းပြောင်းလဲမှုအတွက်သက်သေခံပစ္စည်းများကိုအဖြစ်ဤစာရင်းတွင်တခုတခုအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။မည်သည့်နှုန်းသည် Hankyu Department Store ၏နဝမကြမ်းပြင်ပေါ် Hankyu Umeda ပြခန်းတစ်ခုအလည်အပတ်ခရီးအထင်ကြီးလိမ့်မယ်။ ယခင်ပြပွဲကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းကယ်လီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဗီရိုထဲကနေပစ္စည်းတစ်ခု Nordic ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်အရသာနှင့်နမူနာပါဝင်သည်ကြောင်းချစ်သူများနေ့ချောကလက်ကုန်စည်ပြပွဲများပါဝင်သည်။ မတ်လ 2017 အတွင်းမှာလက်ရှိပြပွဲ ‘: အဆိုပါချက်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့သျှင် Bohemian Glass ကိုစတူဒီယိုတခု’ ‘ဖြစ်ပါတယ်။ Glass ကိုထွင်းထုဆန္ဒပြပွဲများ display ကိုအဖြစ်စုဆောင်းမှုထဲမှအပိုင်းပိုင်းအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကြည့်ရှိသည်နှင့်သင်တစ်ခုခုအံ့ဖှယျတှေ့ရှိစေခြင်းငှါ,!
21 Tsuyunoten Pay
ဘုန်းကြီးကျောင်းနတ်ကွန်းမှာအသင့်လေးစားမှုဂျပန်နည်းနည်းဘက်လမ်းမ၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်ဤတစျဦးယုံကြည်သူများနှစ်ခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံစံများမှပဌနာလက်ခံခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုမချခင်ကောင်းသောကံကြမ္မာလိုသူဒေသခံစီးပွားရေးသမားများဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ Sonezaki Shinju ၏ဂုဏ်အသရေရှိသူတို့၏အရိုအသေပေးချေတဲ့သူလူငယ်များကိုသူတို့ရဲ့ချစ်သူများဖြစ်ကြသည်။ Sonezaki Shinju အဆိုပါချစ်သူများအတူတကွဒါသတ်သေမရနိုင်တော့ဘယ်မှာ Romeo နဲ့ Juliet ဆင်တူတဲ့ပြဇာတ်, ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပါမယ် 1703 ၌ဤနတ်ကွန်းမှာအဖြစ်ပျက်များနှင့်တစ်ဦးဂျပန်ပြဇာတ်ရေးဆရာသည်သူ၏ကစား, အ Sonezaki Shinju မှာသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကပြောကြားခဲ့သည်။ သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုအတွက်သို့မဟုတ်သင့်လက်ရှိဆကျဆံရေးအောင်မြင်မှုချင်တယ်ဆိုရင်သွားလည်လာကြ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းအိုဆာကာအတွက်လုပ်ဖို့10 အရာ, အိုဆာကာလာရောက်လည်ပတ်နေချိန်မှာသင်မပျက်မကွက်မပေးနိုင် 10 မျက်မှောက်, သင်၏စုံလင်သောခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့ Shinsaibashi အတွက်လုပ်ဖို့ကိုသင်ဖူးသောအရာနှင့်တူကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားစာရင်းထွက် Check!
22. Nambas Yasaka
တစ်ဦးရှင်တိုဘုန်းကြီးကျောင်းလာရောက်လည်ပတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသင့်ရဲ့ဂျပန်သွားရောက်လည်ပတ်စာရင်းတွင်ဖြစ်သင့်,နှင့် Nambas Yasaka ဘုန်းကြီးကျောင်းအိုဆာကာအပေါငျးတို့သအများဆုံးသာယာလှပသည်။ အချို့သောရက်ပေါင်းတွင်, သငျသညျပင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရိုးရာဝတ်စုံအတွက်ဒေသခံတွေသက်သေခံလိမ့်မည်။ အများစုမှာဧည့်သည်များက၎င်း၏ vermillion မဟာ-shaped တံတားကြည့်ဖို့ကဒီနတ်ကွန်းထံသို့လာကြ၏။ သငျသညျရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အောက်ကရေထဲမှာသင့်ရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုကြည့်နှငျ့သငျဝနျးကငျြရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သဘာဝတရား၏စဉ်းစားရန်ခေတ္တရပ်တန့်ပြီးဖို့သတိရပါ!
သင်ဟာကြောင့်ဝင်ပေါက်စျေးနှုန်းသင့်ရဲ့သွားရောက်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုချွတ်ဒီပန်းခြံလက်လွတ်မနိုင် – ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့! ဤသည်ကြီးမားသောပန်းခြံဒါဟာ tulips တစ်အိပ်ရာအထက်ကြီးမားတဲ့လေရဟတ်စက်ရှိပြီးအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကမှုတ်သွင်းအများအပြားဥယျာဉ်ရှိပြီး 1990 ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတကာဥယျာဉ်နှင့်အစိမ်းရောင်ကုန်စည်ပြပွဲများအတွက်သူ့ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကတည်းကရောနှောဒေသခံများနှင့်ဧည့်သည်များနှင့်အတူတစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်! ရောင်စုံအပင်များနှင့်ပန်းပွင့်၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအကွာအဝေးနှင့်အတူ, သင်မည်သို့သင့်ရဲ့အိုဆာကာခရီးစဉ်များအတွက်ဤကဲ့သို့သောတည်နေရာတစ်ခုလက်လွတ်နိုင်မည်နည်း လူအပေါင်းတို့သည်ပန်းပွင့်ပွင့်၌နေသောအခါ, ဒီပန်းခြံကိုမြင်ရဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်နွေဦးအတွက်ကြောင်းသတိပြုပါ။
24 ။ Midosuji
လမ်းဒီလမ်းပေါ်ကိုယ်တွေ့ကြည့်ဖို့ကြည်နူးဖွယ်သောခေတ်မီခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းမြို့ရှုခင်းအဘို့ဤစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။သင်ရုံ Prada, Chanel, Dior နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့အကျော်ကြားစတိုးဆိုင်များမှာအချို့စျေးဝယ်လုပ်ဖို့ Midosuji လမ်းမှဦးနိုင်နေစဉ်, သငျသညျလည်းစျေးဆိုင်ပြင်ပ featured ဖြစ်ကြောင်းခေတ်သစ်ပန်းပုကြည့်ဖို့သွားနိုင်။ တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များတက်သည်ထားပြင်ပတွင်အလှဆင်, အကျော်ကြားဆုံးခရစ္စမတ်အချိန်များအတွက်ဆောင်းရာသီတွင်ဖြစ်ခြင်းလည်းရှိပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလကနေဇန်နဝါရီလကုန်မှီတိုင်အောင်, ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အလင်းအိမ်ဒီလမ်းပေါ်ထွန်းလင်းအဖြစ်ကအတူသစ်ပင်များနှင့်အဆောက်အဦးများပါစေ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကြောင့်ယခုနှစ်အဘယ်အရာကိုအချိန်သင်အမြဲစတိုးဆိုင်ပြတင်းပေါက်အတွက်လှပသော display တွေကြည့်ရှုနိုငျပါသညျ!
25 ။ Miyuki-ဒေါရစ်သို့မဟုတ် Korean
26. ကုန်စည်ပြပွဲ Park
ကဒီတည်နေရာ1970 ကမ္ဘာ့ဖလားကုန်စည်ပြပွဲအတွင်း Focal Point သည်ခဲ့တာကြောင့်နေဆဲအခမ်းအနားနှင့်ကောင်းမွန်သောအလိုတော်ရှိလူများအတူတကွဆောင်ကြဉ်းရန်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒါဟာဂျပန်ဥယျာဉ်သည်သဘာဝယဉ်ကျေးမှုပန်းခြံနှင့် Sun ကများ၏မျှော်စင်ပြီးပြည့်စုံသောဓာတ်ပုံဘို့စောင့်ကြိုပါဝင်သည်ရသောကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများရှိပါတယ်။ ပန်းခြံရှိအခြားအကြိုက်ဆုံးနေရာများကိုကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာရှိသမျှသောတိုင်းရင်းသားအုပ်စုတစုကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်သားသမီးရဲ့စာပေအပေါ် 650.000 ကျော်ပစ္စည်းများတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ရှိရာကလေးစာပေများအတွက်နိုင်ငံတကာအင်စတီကျု, ဘယ်မှာ Ethnology အမျိုးသားပြတိုက်တို့ပါဝင်သည်။
ဒါဟာငရဲ၏ဗုဒ္ဓဘာသာပုံဖော်တင်ဆက်၏အတွင်းပိုင်းတစ်ဦးပြပွဲရှိပါတယ်အဖြစ်ဘုရားကျောင်းဒီဗိမာနျ,စိတျနှလုံးအမောမဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဗိမာနျတျောခရီးစဉ်၏အဆုံးမှာသင်တစ်ဦးဖက်စ်ဝိညာဉျသစာဖတ်ခြင်းယူနှငျ့သငျပရဒိသုသွားသို့မဟုတ်လျှင် … အခြားနေရာအရပ်တွေ့နိုင်ပါသည်! သငျသညျအပြစ်ပေးခံရတက်အဆုံးသတ်ပြုလျှင်တစ်ဦး Enma-sama သို့မဟုတ်နတ်ဆိုးဝိညာဉျကိုကျယ်သောဆူညံသံနှင့်အတူသငျသညျတွှေဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်! ဤဗိမာန်တော်ကိုအလည်အပတ်ခရီးအိမ်ပြန်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများအဘို့ကြီးသောပုံပြင်များအများကြီးဖန်တီးမည်!
ဤသူသည်သင်တို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တဦးတည်းတည်နေရာမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်Biliken သို့မဟုတ် Good Luck တပါးသောဘုရားတို့ကိုအိုဆာကာန်းကျင်တစ်ဘုံအင်္ဂါရပ်ဖြစ်တယ်။ Biliken တစ်ခုသို့မဟုတ်ရိုးရာဂျပန်ဘုရားသည်မဟုတ်, အစားအိုဆာကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူလူကြိုက်များရရှိခဲ့သူတစ်ဦး mascot “Be ်၏ဖြစ်ကြောင်းအရာ၏ဘုရားသခင်” ။ သူ့ကို၏ကြီးမားသောရုပ်တုတစ်ခုအိုဆာကာအပန်းဖြေပန်းခြံထဲကနေယူပြီးနောက်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နာယကဝိညာဉျတျောအဖြစ်သူ့ကိုမွေးစားပါပြီ။ တမြို့လုံးလှည့်ပတ်သင်၏အချိန်ကာလအတွင်းမျက်စိထွက်သိမ်းဆည်းထားပါနှင့်သင်တို့သည်ဤရုပ်ပွားတော်၏အမှိုက်ပုံကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအမှတ်တရပစ္စည်းစတိုးဆိုင်များမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်အချို့ရှိပါသည်။ သငျသညျအခြို့သောအားလပ်ချိန်ရှိသည်ဆိုလျှင်အဘယ်ကြောင့်အမဲသွားနှင့်သင်တို့ကိုရှာတှေ့နိုငျမည်မျှ Biliken ရုပ်ပွားတော်ကိုမမွငျ? သူ့ခြေရင်းပွတ်သပ်ရန်နှင့်သူသည်သင်တို့နှင့်အတူမိမိအကံကောင်းပါစေအချို့ကိုဝေမျှမယ်သတိရပါ!
29. တစ်အကြီးစား Dotonbori ဆိုင်လျှော့အတူ Photograph
Dotonboriကိုယူဘဝထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုအများအပြားကျော်ကြားဆိုင်နယ်မြေဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်များကိုရှိပါတယ်!အဆိုပါစားသောက်ဆိုင် Kani Doraku အတွင်း၌ဧည့်သည်ကြိုဆို, ခြေသည်းရွေ့လျားအတူကုမ္ပဏီကြီးကဏန်းရှိပါတယ်! နောက်ထပ်စားသောက်ဆိုင်, Zuboraya, ထိုးနှက်ငါး၏ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်စက္ကူမီးအိမ် lit ခဲ့သည်! ဧရာ octopi အိုဆာကာရဲ့အကြိုက်ဆုံး takoyaki သို့မဟုတ်ထိခိုက် octopi ဘောလုံးအတွင်း၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ကြောင်းကြော်ငြာခြင်း, များစွာသောစားသောက်ဆိုင်များ၏အပြင်ဘက်အပေါ်အနားတွင်ပုန်း! အခွားသောအရိပ်လက္ခဏာဆူရှီ, နဂါးနှင့်အောင်ပွဲအတွက်အားကစားသမားရဲ့မျက်နှာ၏ဧရာမမော်ဒယ်များပါဝင်သည် – ။ Glico က Man
30 ရက်။ အဆိုပါကြီးမားသော illumination Advertisements မှာလိုက်ရှာခံစားကြည့်ပါနဲ့နီယွန် Lamps
Dotonbori လည်း ” အိပ်ဘယ်တော့မှမယ့်လမ်း ” အဖြစ်လူသိများ, ဤနယ်မြေဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်များကိုကို turn off ဘယ်တော့မှကြောင့်အကြောင်းပြချက်များထဲမှအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်! အရောင်များနှင့်အလင်းအိမ်ပတျဝနျးကငျြအဆောက်အဦးအများအပြားပိတ်ထားထွန်းလင်းမှပေါ်လာသည့်အခါဤအကြော်ငြာများကိုမြင်လျှင်ညအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူများကိုကွဲပြားခြားနားသောကြော်ငြာများအကြားလျှောနေချိန်မှာအနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိစဉ်အခါအချို့က, fixed ပုံရိပ်တွေဖြစ်ကြသည်။ စျေးဆိုင်များတောင်မှတစ်ခုလုံးကိုနှစ်ဖက်သူတို့ကိုပူးတွဲနီယွန်မီးခွက်ရှိသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောကြီးမားသောနယ်မြေဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်များကိုနှင့်ရော, ဒီကွောကျရှံ့ဖှယျမျက်မှောက်တစ်ဦးကိုမဆိုအိုဆာကာခရီးသွားဧည့်များအတွက်တွေ့မြင်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်စကားပုံရှိပါသည်ဒေသခံစားနပ်ရိက္ခာစား” သင်ကအိုဆာကာအတွက် drop မှီတိုင်အောင် Kuidaore ။ ‘ Kuidaore အစားအစာထဲမှာသာမန်ထက်အားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဘာသာနှင့်လူများစွာ Dotonbori ့လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ သမုဒ္ဒရာထဲမှအနီးကပ်ဖြစ်ခြင်း, အိုဆာကာခရုဇ် feature ကိုပင်လယ်စာနဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ငါးပါဘူး။ ဒါ့အပြင်နွေရာသီလများတွင်နွေးသောအပူချိန်ရှိခြင်းကဒီမှာဒေသခံများက၎င်းတို့၏ဟင်းလျာများမှာနေတဲ့ရှေးခယျြဖို့လတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးရှိတယ်ဆိုလို။ လတ်ဆတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်း, tastier ပန်းကန်စေအဖြစ်အတော်များများကဒေသခံတွေဟင်းရည်အစားအစာများကိုခံစား။ အစားအသောက်အစားအသောက် kiosk ကနေဖန်စီစားသောက်ဆိုင်များ Dotonbori 24/7
အစားအသောက်နှင့်အတူလုံးဝ ” kuidaore ” သင်ကအချိုပွဲ … ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Dotonbori ထိုကဲ့သို့သောရေခဲမုန့်, tarts, cheesecake တွေ, cookies, pastries နှင့်အခြားသူများအဖြစ် yummy ရယူထားသောဝတ်ပြုများစွာကိုအချိုပွဲဆိုင်များတွင်ပါတယ်။ သင်ပင်တစ်အြန္ကြန္မီယာကီသို့မဟုတ်ဂပြနျ pancake ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်။ Hozenji စန်း pei နှင့်အခြားစားသောက်ဆိုင်ကိုသင်ကင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်တတ်နိုင်သမျှရှိရာအဆောက်အဦရှိသည်! သငျသညျသငျတို့ရှေ့တခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူးမယ်လို့သကြားလုံးနှင့်အရသာတစ်ခုအကွာအဝေးကိုတွေ့လိမ့်မည်သကဲ့သို့, Glico Candy စတိုးဆိုင်ဦးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ တစ်ဦးကဒေသခံအကြိုက်ဆုံးသာအိုဆာကာစီးတီးတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်သော takoyaki အရသာ pretz, ပါ!
Dotonbori အဝတ်အစားဆိုင်များတွင်ကနေအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်း kiosk ထုတ်ကြည့်ပါ။ဤအထဲတွင်, သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောသကြားလုံး, စာရေးကိရိယာ, အသေးစားလက်ဆောင်များနှင့် ” Biliken ကောင်းသောကံကြမ္မာ၏အိုဆာကာဘုရား ” ရုပ်ပွားတော်သကဲ့သို့သငျသငျနှငျ့အတူပြန်ယူနိုင်သည်ကိုနည်းနည်း trinkets, ရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ဤဂျပန်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင် anime နှင့် manga ကိုစျေးဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ သငျသညျ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီမပြုစေခြင်းငှါတစျခုမှာဆိုင်အရာအားလုံးက 100 ယန်းရှိရာ 100 ယန်းဆိုင်, ပါ! ဤရွေ့ကားဂျပန်အတွက်အလွန်လူကြိုက်များသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြား, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်စျေးပေါစျေးနှုန်းကိုမတှေ့နိုငျဤမျှလောက်များစွာသောချစ်စရာနှင့်ထူးခြားသောပစ္စည်းကိုရှာဖွေမည်!
ကမ္ဘာပေါ်မှာအများအပြားပြဇာတ်ရုံရပ်ကွက်ရှိပါတယ်ဂျပန်ပြဇာတ်ကို၎င်းကြည့်ရှုကြလော့အနောက်အဆုံး, ဘရော့ဒ်ဝေး, Las Vegas မှာ။ ဒါကြောင့်ဂျပန်အတွက်အသက်အကြီးဆုံးရုပ်ရှင်ရုံအချို့အိမ်ရှင်အဖြစ်အဖြစ် Dotonbori သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာအများအပြားရုပ်ရှင်ရုံများ၏တဦးတည်းအတွက်ဖျော်ဖြေနှငျ့သငျ display ကိုအပေါ်ပြဇာတ်တစ်ခုအကွာအဝေးရှာတှေ့နိုငျ၏ဂျပန်အိပ်မက်အတွက်သရုပ်ဆောင်များကို။ အခြားသူများကိုရှေးဂျပန်ကနေ kabuki, မျက်နှာဖုံးများအသုံးပြုပြဇာတ်ရုံတစ်စတိုင်နှင့်ကခုန်ပြနေစဉ် Yoshimoto ပြဇာတ်ရုံများကဲ့သို့အခြို့သောရုပ်ရှင်ရုံ, သာဟာသပြဇာတ်ကိုပြ။ တချို့ကရုပ်ရှင်ရုံတစ်ကစားလက်မှတ်မိန့်ရသောအခါညစာစားသောက်ပူဇော်ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့် Dotonbori ထွက်မယ့်ညဥ့်ပျော်မွေ့သည်မဟုတ်လော
Dotonbori ၏ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် featured bunraku ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ရုပ်သေးအစားသရုပ်ဆောင်များကို၏ဇာတ်လမ်းပြောပြဘယ်မှာကစားအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်-ဂုဏ်ပြုဂီတအတူနေစဉ်ရုပ်သေးများသောအားဖြင့်ရိုးရာပြဇာတ်သို့မဟုတ် folktales ထွက်ပြုမူ။ ဒီအနုပညာပုံစံ 17 ရာစုအတွင်းကဒီမှာဝေါဟာရအဖြစ်အတော်များများ Dotonbori တွင်ဤပြပွဲသို့သွားရောက်။ သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသား Bunraku ပြဇာတ်ရုံမှာကစားသောဤပြပွဲ၏တဦးတည်းတွေ့လိမ့်မည်။
အိုဆာကာအမေရိကန်နှင့်ဖိလစ်ပိုင်ခညျြအနှောသွားရောက်လည်ပတ်ရာမှဂျက်ဇ်ဂီတဂီတကိုကြားပြီးတာနဲ့တစ်ဂျက်ဇ်ဂီတကိုဂီတတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုနားထောငျ,တကကျော်ကြားအတိတ်အချိန်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ Dotonbori, jazz ခန်းမနှင့်ကဖေးနှင့်အတူစီတန်းခံရဖို့အသုံးပြု, နှင့်နိုင်ငံတကာဂျက်ဇ်ဂီတသမားအဲဒီမှာကစားရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏လူကြိုက်များဂျပန်ဂျက်ဇ်ဂီတကိုခေါ်သစ်တစ်ခုအမျိုးအစားသို့ပြောင်းလဲအခြားအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်မှေးမှိန်ပြီးနောက်ဂျက်ဇ်ဂီတကိုဤနေရာတွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဂီတ၏ဤစတိုင်မတ်ေတာသအဟောင်းများနှင့်ခေတ်သစ်လွှမ်းမိုးမှုရောနှောဒေသခံများနှင့်ဧည့်သည်များအားဖြင့်ကျင်းပကြသည်ရှိရာယနေ့အပေါ်သယ်ဆောင်။ သင်တစ်ဦးအေးမြ, jazz စည်းချက်မှ grooving လူတွေမြင်ချင်လျှင် Tenjin စျေးဝယ်လမ်းပေါ်မှာသစ် Suntory ငါးခုဘားထွက်များစစ်ဆေး!
37. ထိုတူးမြောင်းသူ့ဟာသူလျှောက်မယ့်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်လာမယ့်တစ်ဦးတူးမြောင်းမှတည်ရှိသည် ယူ.
Dotonbori အကျိုးစီးပွားအရာများစွာကိုဤအကြဲကြဲလမျးလြှောကျသှားခွငျးတလျှောက်တွင်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ သငျသညျဓာတျပုံပညာယူပြီးစိတ်ဝင်စားလျှင်, သင်အလင်းအိမ်ပုကြဲကြဲမျက်နှာပြင်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်ဘယ်လိုအတိတ်သို့မသွားနိုင်ပါ။ သငျသညျအိုဆာကာ၏တွေကတော့မြင်ချင်လျှင်, တူးမြောင်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်အနီးအနားရှိစျေးဆိုင်ကနေတိုက်ရိုက်လွှဂီတအဆိုတော်နှင့်အသံများကလိုက်ပါသွားပါလိမ့်မည်။ သငျသညျယောက်ျားတစ်ယောက်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးအထင်ကြီးလိုပါကဤနေရာတွင်လမ်းလျှောက်သင်ကနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလွန်ရင်ခုန်စရာလေထုစူးစမ်းခြင်းနှင့်ပေးအများအပြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရပ်တို့ကိုမပေးပါလိမ့်မယ်။
Dotonbori ၏ခေတ်သစ်အင်္ဂါရပ်များများထဲတွင် bygone ခေတ်မှလာလျှင်အဖြစ်ကြည့်တဲ့လမ်းသွားလည်းမရှိ။ Hozen-ဂျီ Yokocho လိန်းသမိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်မျက်နှာစာနှင့်အတူအလှဆင်ထားသည်အပေါင်းတို့နှင့်လမ်းများဂျပန်အတွက်အဲဒိုကာလအတွင်းမှာခဲ့ကြသည်အဖြစ်လမ်းသွားသူ့ဟာသူ, ကျောက်ထဲကနေကိုဖန်ဆင်းသည်။ သငျသညျတလျှောက်ဆက်လက်လျှင်, သင် Hozen-Ji ကဘုရားကျောင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တစ်ဦးကလှပသောအကြောင်းပြချက်သူတို့ lit ကြသည်အဖြစ်နေဝင်ချိန်န်းကျင်ကိုတောင်ပိုပြီးလှပနေသောအိမ်တော်ပတ်လည်စက္ကူမီးအိမ်တွေ့နှင့်ဤသည်သန့်ရှင်းသော site ကိုမှဧည့်သည်များမှနွေးထွေးစွာအလင်းရောင်ချွတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
39 ။Furoshiki အိုဆာကာ (ပိတ်စခြုံ)
Furoshiki ဂျပန်အထည်အတွက်အရေးကြီးသောပစ္စည်းများအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိက၏လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ရှုမြင်နှင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းအနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်, အစားအစာ, လက်ဆောင်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများသည်ဤအလှဆင်ပုဆိုးပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်။ ထုပ်အတှကျအသုံးပွုအဆိုပါအထည် furoshiki အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
ဒါကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဝေးပြန်အဋ္ဌရာစုအဖြစ် sento သို့မဟုတ်ဂပြနျအများပြည်သူဗတ်မှဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ အဆိုပါဗတ်သွားရောက်လည်ပတ်သူကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်သီးခြားအထုပ်ထဲမှာမိမိတို့အဝတ်ကိုခြုံမယ်။ ဤရွေ့ကားအလှဆင်ထုပ်ပိုးပြီးကုန်ပစ္စည်းများအလားတူအလှဆင်ပုဆိုးသုံးပြီးနှင့်နည်းစနစ်ချည်ပတ်ရစ်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်စျေးကွက်ပေါ်လာဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ဤရွေ့ကားပုဆိုးချည်ခြင်းနှင့်ပိတ်ချောမှထွက်ကြ၏။ ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောအထည်နှင့်ဒီဇိုင်းများသို့ပြောင်းလဲအဖြစ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးချည်နည်းစနစ်။ ခေတ်သစ်ကာလ၌, ထို furoshiki ပုဆိုးကိုလည်းပိုး, နိုင်လွန်နှင့်အခြားပစ္စည်းများထဲကလုပ်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားပုဆိုးတိကျတဲ့ပစ္စည်းများခြုံဖို့အရွယ်အစားတစ်အကွာအဝေးအတွင်းထံသို့လာကြ၏။
40 Origami Osaka
ဆဌမရာစုအတွင်းမှာတော့, စက္ကူဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများအားဖြင့်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်ထံမှဂျပန်မှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာအလွန်စျေးကြီးကြီးနှင့်ပထမဦးဆုံးစက်ရုံအမျှင်တွေနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အထူးအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်အခမ်းအနားများသာစက္ကူခေါက်ခြင်းအလှဆင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စက္ကူခေါက်ခြင်းနှင့်အတူအစောပိုင်းအစဉ်အလာရိုးရာဂျပန်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောကံမှုအတွက်စျေးကြီးလက်ဆောင်တွေလိုက်ပါသွားကြောင်းအထူးစက္ကူခေါက်ခြင်းပုံစံမျိုးစုံဘို့လိပ်ပြာအောင်ပါဝင်သည်။ မကြာခင်မှာပဲဒီအမျိုးသားရေးအတိတ်အချိန်ဖြစ်လာပြီးယခုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။
41Sake Tasting Osaka
အိုဆာကာကြိုးအလိုငှာမျိုးစုံမြည်းစမ်းကြိုးအလိုငှာတစ်ဦးလူသိများတဲ့ဂျပန်သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအရက်နှင့်ရေ, ဆန်, Malt ဆန်နှင့်တဆေးကို အသုံးပြု. ပြသနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သွန်းလောင်းရဲ့အရသာနှင့်အရက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကို ထောက်. ငွေရတတ်သောသူနှင့်ရှုပ်ထွေးသောမှအလင်းနှင့်မောထံမှအထိရသောအရသာ၏အတော်လေးကြီးမားတဲ့စုဆောင်းခြင်းရှိနိုင်ပါသည်။
ကို ထောက်. အမှန်တကယ်ဂျပန်တွင် nihonshu သို့မဟုတ် seishu ဟုခေါ်သည်နှင့်တထောင်တစ်နှစ်ကျော်မျှတစ်အကြိုက်ဆုံးအဖျော်ယမကာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကိုပထမဦးဆုံး 689 အေဒီဂျပန်နေ့စွဲအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ, တစ်ဆန်သောက်၏မှတ်တမ်းများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်နေသည်နေစဉ်။ ဒါကြောင့်များစွာသောဘာသာရေးအခမ်းအနားများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်အဖြစ်ဒါဟာအမည်အား ” ဘုရားများ၏သောက် ” ပေးထားခဲ့သည်။ omiki ကိုခေါ်တစ်ခုမှာရိုးရာဓလေ့ထုံးစံဘာသာရေးသဟာယအဖြစ်ကို ထောက်. သောက်သုံးလူတွေပါဝငျသညျ။ ဒါဟာသင်သောက်တခါသငျသညျပိုမိုနီးကပ်စွာဘုရားဖြစ်လာကြပြီဟုယုံကြည်နေသည်။ ကို ထောက်. ထုတ်လုပ်မှုအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့် 10 ရာစုအတွက်ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းနှင့်ကွန်းပြင်ပအသုံးပြုရန် ထောက်. စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်စတင်ခဲ့သည်။ ဤအသောက်စျေးကြီးဖြစ်လာအဖြစ်ကတတ်နိုင်သူများများအတွက် status ကိုသင်္ကေတအတွက်ရလဒ်။ မည်သူမဆိုနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများနောက်တော်သို့လိုက်အဖြစ်ကို ထောက်. ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် 1868 အေဒီကနေနန်းစံအတွက်ဧကရာဇ်မေဂျီလက်အောက်တွင်ဥပဒေများကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ကြသည်။ နီးပါး 30000 ဘီယာတစ်ဦးတည်းတစ်နှစ်အတွက်အပင်ပေါက်သော်လည်း။ အမြိုးသမီးမြားကို ထောက်. အောင်အတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍ ယူ. မကြာမီအမည်ပြောင် ” အိမျကဘီယာအရက်ချက်သခင် ” တက်ခူး။ လူတို့သညျ 16 ရာစုကာလအတွင်းကျော် ယူ. ထောက်. ထုတ်လုပ်မှုနေဆဲအထီးကြီးစိုးစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကို ထောက်. မကြာမီယခုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှန်းကျင်တွေ့ရှိဂျပန်ခရီးသွားများနှင့်ဘီယာနှင့်အတူထိခိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
42 ဂျပန်သကြားလုံးအိုဆာကာ (Wagashi)
Ikebana သို့မဟုတ်ပန်းကြိုးစားပါ။ဤသည်ပန်းပွင့်နှင့်အခြားသဘာဝသဟဇာတ, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အလှအပ embody မှကဲ့သို့သောလမ်းထဲမှာထည့်ထားရှိရာတစ်အနုပညာအဖြစ်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။
အဆိုပါစကားလုံး Ikebana ကိုယ်တိုင်က ” အသကျရှငျစီစဉ်ပေးပန်းပွင့် ‘သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်’ ‘ပန်းပွင့်အသက်ပေးခြင်း’ ‘ကိုဆိုလိုသည်။ ပန်းပွင့်ဝေးပြန်သတ္တမရာစုသကဲ့သို့ပြုသောပူဇော်သက္ကာဘို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဒါကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဗုဒ္ဓဘာသာဗိမာန်၌ဇစ်မြစ်ရှိပါတယ်။ ပန်းပွင့်အစီအစဉ်များသို့အရွက်နှင့်အခြားသဘာဝပေါင်းထည့်ခြင်းအခြားဂျပန်ဘာသာ, ရှင်တိုကနေစိတ်ကူးတစ်ခုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ Shintoism လှပသောနှင့်ဝိညာဉ်အဖြစ်အားလုံးကသဘာဝဒြပ်စင်မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ပန်းပွင့်ယုံကြည်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများဟာသူတို့ရဲ့ပန်းပွင့်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအစီအစဉ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုဖန်တီးရန်အခြားသူများအတွက်နိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်အခြားသူများအားသွန်သင်ပေးစတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ် Ikebana ဆယ်ငါးရာစုအတွင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်အနုပညာစတိုင်လ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ် Ikebana ကျောင်းများအသီးအသီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အသွင်နဲ့စတိုင်ရှိခြင်း, ဖွဲ့စည်းခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အပွင့်အစီအစဉ်များအတွက်များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်၏နေအိမ်များအတွက်ဒဏ်ငွေအနုပညာရဲ့သင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာ nageire တူသောစတိုင်များလက်ဖက်အခမ်းအနားနှင့် haiku ကဗျာကဲ့သို့အခြားသီးသန့်ယဉ်ကျေးမှုရေးရာနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်ကာလ၌အခြားသောအနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းစတိုင်များနှင့်နည်းစနစ် ikebana သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြပေမယ့်အခြေခံအကျဆုံးကျောင်းအုပ်အတူတူပင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤအမှု၏အရေးအပါဆုံး ikebana နေဆဲအိမ်ပြင်ဟာအိမ်တွင်းပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ကူညီဝိညာဏလိုက်စားအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောရာသီများတွင် Maikoya မှာ ikebana ကြိုးစားနိုင်ပါ။
44 Calligraphy Osaka (Shodo)
ဂျပန်လက်ရေးလှရေးအများဆုံးယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့ပင်အိုဆာကာ (Shodo),ဂျပန်လက်ရေးလှရေးသို့မဟုတ် Shodo နှစ်ပေါင်းရာချီကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါတဲ့အနုပညာပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Shodo တိုက်ရိုက် “အရေးအသား၏လမ်း” ကိုဘာသာနှင့်ဖြီးနှစ်ပြီးသောတစ်ဦးမှင်ကို အသုံးပြု. ဇာတ်ကောင်ရေးသားခြင်း၏အစဉ်အလာလမ်းဖြစ်၏။
ဂျပန်လက်ရေးလှရေးအမှန်တကယ် 600 အေဒီမတိုင်မီတရုတ်ပြည်ရှိစတင်ခဲ့သည်။ ခရီးသွားများအတွက်တရုတ်အရေးအသား shared အခါဂျပန်အက္ခရာ, ဒါမှမဟုတ်ရာတွင်ခန်းဂျီး, တရုတ်စာလုံးကိုဖန်ဆင်းသည်။ သမိုင်းပညာရှင်ဒီဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားဖို့နဲ့ဆက်နွယ်ခံခဲ့ရသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဂျပန်ဟိရဂဏကိုခေါ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်တီထွင်ပြီးနောက်ကဗျာ, ဒဿနနှင့်အခြားစိတ္တဇသဘောတရားများကိုတဖဲ့ဆေးထိုးခြင်းနှင့်အဖော်ပြရန်ပိုပြီးဖက်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်, Shodo ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အနုပညာပုံစံသို့တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
45. ကီမိုနို Yukata
ကီမိုနိုဂျပန်သမိုင်း (794-1192 အေဒီ) ၏ဟဲအိအန်ကာလအတွင်းထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသင်္ကန်းကိုပိုမိုအလွှာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်အဖြစ် ပို. ပို. အနုစိတ်ဖြစ်လာသည်။ အတော်များများကကီမိုနိုဒီဇိုင်းများကိုလည်းကွဲပြားခြားနားသောရာသီ, အားလပ်ရက်သို့မဟုတ်သင်ပိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လူတန်းစားကိုယ်စားပြုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ မင်းသမီးဝတ်ဆင်သည့်ပိုးကီမိုနိုကိုပိုပြီးမှတ်မိနေမြဲနေစဉ်, သူတို့ကလည်းထိုကဲ့သို့သောချည်ပိတ်သို့မဟုတ်ဖဲကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများထဲကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကိုးရာစုကာလအတွင်းဂျပန်အစိုးရ၏ပိုပြီးအနောက်တိုင်းအဝတ်အစားများနှင့်အလေ့အထများချမှတ်ရန်လူအားပေးခဲ့တယ်။ ရလဒ်အဖြစ်ကီမိုနိုယခုယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးအခမ်းအနားအဝတ်အစားအဖြစ်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အထူးအခါသမယအပေါ်အများဆုံးမကြာခဏဝတ်ဆင်နေကြသည်။
46 ။ အတွက် Maiko Geisha
အိုဆာကာတစ်ဦးကMaikoမိတ်ကပ်ေူပာင်းလဲရေးကိုအပြည့်အဝဂျပန်အချိန်-ဂုဏ်ပြုအနုပညာအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားကျိုတိုအတွက်ဖျော်ဖြေရေး,ဖြစ်လေ့လာနေသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ပုံမှန်အားသူမ၏အသားအရေ paler ပေါ်လာစေအဖြစ်သူမ၏နှုတ်ခမ်းများနှင့်မျက်စိပေါ်လွင်စေရန်မိတ်ကပ်အပေါ်တတ်၏။ ဒီ ‘ဂျပန်ရိုးရာအဖြူရောင်စတိုင်’ ဖို့ဘာသာအရာ shironuri စတိုင်ဟုခေါ်သည်, နှင့်အဖြူအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ Maikos ရိုးရာမိတ်ကပ်ထုတ်ကုန်ဝတ်ဆင်အဖြစ်ရှေးဂျပန်မှဆင်းပေးအပ်သည့်နည်းစနစ်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌မိမိတို့ကျော်ကြားမျက်စိနှင့်နှုတ်ခမ်းပုံစံမျိုးစုံထပ်ဖွ။ MAIKOYA မှာသငျသညျ Maiko, Geisha, Oiran အသွင်ပြောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
ကြော်ဂျပန်ဟင်းချက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသင်တစ်ဦးတစ်ချိန်ကဘဝအချိန်အတှေ့အကွုံအတွက်လိမ့်မည်ပေးပါသည်:ဂျပန်တွင်ဒေသခံတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးဆီကနေရိုးရာဂျပန်ဟင်းလျာများသင်ယူခြင်း! အိုဆာကာဂျပန်အတွက်အစားအစာမြို့တော်စဉ်းစားနှငျ့သငျကွိုးစားရန်အဘို့အများစွာကို appetizing ဟင်းလျာများဒေသကနေရှိပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤအရသာအစားအစာကိုစားရပေမယ့်သင်ကအိမ်မှာပြန်ပွဲခံစေနိုင်သည်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်မဟုတ်သာ!
48 Cooking Class Osaka
သငျတို့အတန်းအစားအိုဆာကာဟင်းချက်မှာ 20 ကျော်မတူညီတဲ့ချက်ပြုတ်လှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ဤစာရင်းတွင် 68 စေသည် 🙂
အိုဆာကာထဲမှာမြင်ရတဲ့အဘယ်သို့အိုဆာကာအတွက်ဘာလုပ်ရမှန်းအိုဆာကာအိုဆာကာထိပ်တန်း 50အိုဆာကာလုပ်ဖို့ထိပ်တန်းအမှုအရာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံး 50အကောင်းဆုံးအမှုအရာ